China ahụhụ ahụhụ ahụhụ Esbiothrin 93% TC PBO emepụta na suppliers | Senton
Ahụhụ Na-egbu Ahụhụ Esbiothrin 93% TC PBO
Aha ngwaahịaBio Esbiothrin
CAS Mba: 28434-00-6
Aha ngwaahịa Esbiothrin
CAS Mba 28434-00-6
Ebe Esi 386,8 ℃
Njupụta 1,05g / mol
Es-biothrinbụ elu mma pyrethroid Ahụhụ, na a dịgasị iche iche nke ọrụ, ọ na-eme site na kọntaktị na e ji a ike kụrụ aka-ala mmetụta.Es-biothrinbu na-arụsi ọrụ ike na-efe efe na-efegharị ụmụ ahụhụ, ọ kachasị anwụnta, ijiji, anụ ọhịa, mpi, ọchịcha, fleas, chinchi, ndanda, wdg.Es-biothrina na-ejikarị na arụ nke ụmụ ahụhụ ute, anwụnta na-ekpo ọkụ na mmiri emanators,Es-biothrinenwere ike iji ya naanị ma ọ bụ jikọta ya na ọgwụ ahụhụ ọzọ, dị ka Bioresmethrin, Permethrin ma ọ bụ Deltamethrin yana ma ọ bụ na-enweghị Onye mmekorita (Piperonyl butoxide) na azịza.Hot Pesticides Agriculture Chemical semụ ahụhụ, irè Agrochemical ahụhụ Imidacloprid, ọgwụ ahụhụ pyrethorid Cypermethrin bụkwa ngwaahịa anyị.Ọ bụrụ na ịchọrọ ngwaahịa anyị, biko kpọtụrụ anyị. Ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ ọkachamara mba ụwa.
Ngwa: O nwere dị ike na-egbu ihena ịkụda ya aka na ụmụ ahụhụ dịka anwụnta, ụgha, wdg. Ọ dị mma karịa tetramethrin. Site na nrụgide vapo kwesịrị ekwesị, a na-etinye ya maka eriri igwe, akwa na mmiri mmiri.
Ejiri Dosage: Na eriri igwe, ihe dị na 0.15-0.2% nke etinyere na ụfọdụ ndị ọrụ mmekọrịta; na ihe anwansi anwansi nke na-ekpo ọkụ, ihe 20% mebere na ihe mgbaze kwesịrị ekwesị, onye na-eme ihe, onye mmepụta, antioxidant, na aromatizer; na nkwadebe aerosol, 0.05% -0.1% ọdịnaya etolite na-egbu egbu gị n'ụlọnga na synergistic gị n'ụlọnga.
Nsí: Nnukwu ọnụ LD50 na oke 784mg / kg.
HEBEI SENTON bụ ụlọ ọrụ ahịa mba ụwa ọkachamara na Shijiazhuang, China. Isi azụmahịa gụnyereNkọwapụta, API & Intermediates na Basic Chemicals. Elydabere na ogologo oge na onye òtù ọlụlụ na ndị otu anyị, anyị gbalịsiri ike ịnye ngwaahịa kachasị mma na ọrụ kacha mma iji gboo mkpa ndị ahịa.
Na-achọ ezigbo mma ọgwụ ahụhụ Esbiothrin Manufacturer & supplier? Anyị nwere nhọrọ dịgasị iche iche na nnukwu ọnụ ahịa iji nyere gị aka ịmepụta ihe. Omume Ọsọ niileAhụike ỌhaMụ ahụhụ na-egbu egbu dị mma. Anyị bụ ndị China Mmalite Factory nke Liquid ahụhụ Esbiothrin. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: Maleic Hydrazide Nwa Oge Họrọ Ahịhịa
D-allethrin High Quality ahụhụ
Ezinaụlọ ụmụ ahụhụ Pesticide Mepe ...
Ezinyere Ezin'ụlọ Na-agba Ahụhụ Diethyltoluamide
Biomụ ahụhụ Esbiothrin 93% TC
Ngwurugwu Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Tetramethrin nwere ike
High Quality Agriculture Products ahụhụ na C ...